Uyisebenzisa kanjani iCitypaq de Correos kunye nendlela yokufumana okuninzi kuyo | Iindaba zeGajethi
Uyisebenzisa kanjani iCitypaq de Correos kunye nendlela yokufumana okuninzi kuyo
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi, Tutorials
Ngakumbi nangakumbi kuthi senza uninzi lokuthenga kwi-Intanethi, kokubini kwinqanaba lobuchwephesha kwaye phantse kuyo nantoni na. Nangona kunjalo, ingxaki yokuhanjiswa kwepasile isekhona ngoku ngenxa yomthamo womxholo kwaye nangenxa yokuba uninzi lwethu alufumaneki kwindawo yokuhambisa xa bekuvunyelwene. Kungako kunjalo Thumela waphosa Isixeko, isisombululo esimangalisayo esivumela ukuba siqokelele iiphakeji nanini na xa sifuna kweyona ndawo ikufutshane yokuhambisa kwimidla yethu. Sikuzisa isifundo esincinci ukuze uqonde ngokupheleleyo ukuba iCitypaq isebenza njani kwaye singenza njani ukuze senze ubomi bethu bube lula.
1 Yintoni iCorreos Citypaq?
2 Ndingayikhetha njani into yokuhanjiswa kwiCitypaq?
3 Ndiyilandelela njani iCitypaq kwaye ndiyichola?
4 IsiXeko seCappa Correos
Yintoni iCorreos Citypaq?
Ngokusisiseko yenye yezo zinto zabantu ezingasoloko zifumaneka ekuziseni iphakheji kwaye bagqibe kwelokuba basebenzise indawo yokuhambisa esisigxina ngokukhuselekileyo kwaye baye kwiphakheji yabo ngexesha elifanelekileyo.. ICorreos isasaze ezi Citypaq kwiindawo zeqhinga kuyo yonke intsimi yaseSpain, kulula ukufumana iCorreos Citypaq, umzekelo, ecaleni kwezikhululo zegesi, kumaziko okuthenga okanye kwiindawo ezinomdla okhethekileyo kubantu abahlala esixekweni.
Le yindlela iCorreos ebeka ngayo ibhokisi emthubi enkulu eyahlulwe yangangamacandelo ohlukeneyo. Xa senza ukuthengwa kwi-Intanethi kwaye sikhetha isiXeko sePaq, ikhuriya ifaka ukuthengwa kwethu kule ndawo yonikezelo kwaye sifumana isaziso kwifowuni yokunxibelelana esithe sayizisa ngexesha lokuthenga, ngenxa yoko siya kunikwa ulwazi oluyimfuneko ukuze siqhubeke nokuqokelela umxholo wethu ofakwe eCitypaq. Ukulungiselela le nto, kuya kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo zokhuseleko ezinenjongo yokuba umniniyo ayinyani kuphela onokuthi asuse iphakheji.
Ndingayikhetha njani into yokuhanjiswa kwiCitypaq?
Xa sithenga kwivenkile ekwi-intanethi evumelene noCorreos ipasile kunye nekhuriya sinokuyikhetha ngokukhawuleza ngokucinezela «Indawo yokuposa eposini»Emva koko imephu iya kuvela kwaye iya kusivumela ukuba sisebenzise ezi ndawo zokuhambisa zeCorreos Citypaq. Le yeyona ndlela ilula neqhelekileyo, ngakumbi ukuba siza kuyisebenzisa iCitypaq manqaphanqapha, Oko kukuthi, asifuni kuhlala sisebenzisa Isixeko, kodwa kuxhomekeke kuthengo ngalunye esilufunayo, kodwa kukho indlela yokuzenzekelayo kuzo zonke izinto esizamkelayo.
Ngohlelo lokusebenza ukuya Android e iOS Ungagcwalisa idatha yakho yomsebenzisi weSixeko, emva koko ulandela ubumbeko kwaye ucofe «Yongeza Citypaq» Iya kusivumela ukuba sabele eyona inomdla kuthi kubo bonke abo bajikeleze thina. Nje ukuba ukhethe, cofa apha «idilesi yokuthenga kwi-intanethi », Ngelo xesha siza kunikwa ikhowudi yoonobumba abakhulu abasibhozo abaya kubekwa phambi kwegama lethu nefani, oko kuthetha ukuba ukusukela ngoku xa sikhetha ukuhambisa izinto sibeka loo khowudi phambi kwegama lethu kwaye iofisi ehambelana nayo iya kuba ophethe ukuyihambisa kwi-Citypaq eyabelwe thina.
Ndiyilandelela njani iCitypaq kwaye ndiyichola?
Nje ukuba imveliso ithunyelwe kwiPosi yaseCitypaq Siza kufumana isaziso ngeposi i-imeyile okanye i-SMS (ukuba sibhalise ngempumelelo kwisicelo) esiya kusilumkisa ukuba kungekudala siza kufumana iphakheji kwi-Citypaq ekhethiweyo. Le imeyile iqulethe inombolo yokulandelela kunye nekhonkco kwaye xa ucinezelwe, imeko efanayo iyajongwa. Xa iphakheji ihanjiswe ngokuchanekileyo kwi-Citypaq ngumphathi, siya kufumana enye i-imeyile enedatha eyimfuneko yokususa iphakheji.
Le imeyile iqulethe ibhakhowudi ukuba sibhalisile kwisicelo, kunye nekhowudi yokuvula xa kunokwenzeka ukuba ibhakhowudi isilele. Kufuneka siye kwiscreen seSixekopaq esikhethiweyo. Nje ukuba singenise ikhowudi yeposi ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo, ucango apho kungena khona iphakheji yethu luya kuvuleka ukuze sikwazi ukurhoxisa ngoxolo olupheleleyo lwengqondo. Ngoku kufuneka sithathe iphakheji kwaye sivale umnyango ngokuchanekileyo ukuqinisekisa ukuba inkqubo ifumana ulwazi ngaphandle kwengxaki ebonakalayo, sele sinayo iphakheji yethu.
IsiXeko seCappa Correos
Le yeyona mibuzo ixhaphakileyo ngelixa sisebenzisa iCorreos Citypaq:
Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa iCorreos Citypaq? Akufanele ube nangxaki ngelixa usebenzisa iCorreos Citypaq kuba iibhokisi zikhuselekile kuba zenziwe ngezinto ezinganyangekiyo, kwiindawo zikawonke-wonke ezenza ukuba kubonakale kakhulu ukuba kubiwe kwaye kubekwe iliso kwiikhamera zokujonga ividiyo amaxesha amaninzi. Ukushiya iphakheji kwi-Citypaq akukho nto ingakhuselekanga kunayo nayiphi na enye indlela.
Ngaba zonke iivenkile ziyahambelana neCorreos Citypaq? Ngokubanzi iiodolo ezivela kwiAmazon, iGearBest, i-eBay kunye nayiphi na inkampani esebenzisa iCorreos njengomthengisi ihanjiswa ngaphandle kweengxaki, kwimeko yeAmazon kuqhelekile ukuba zisebenzise ezinye iinkqubo zokuhambisa, ke kufuneka sikhethe ukuba iodolo isiwe kwindawo ethile Iposi, eya kuthi ikhathalele ukuyisa kwi-Citypaq ehambelanayo.
Kuthekani ukuba i-odolo yam ayihambelani neCitypaq okanye akukho windows ezikhoyo? Emva koko iposi iyakuqhagamshelana nathi ukuze sikwazi ukuya kwi-ofisi esikhenketha kuyo ukuze sithathe iphakheji yethu ngeposi okanye ngomnxeba.
Zingaphi iintsuku ezinokubakho iphakheji eCorreos Citypaq? Sinokushiya iphakheji kwindawo yokuhlala yaseCorreos Citypaq ubuninzi beentsuku ezi-3, okt iiyure ezingama-72 ukusuka ekuzisweni, kungenjalo iya kurhoxiswa kwaye ibuyiselwe kwimvelaphi yayo.
I-Citypaq iya isiba ngakumbi nangakumbi ngokubulela ngenxa yokuguquguquka kwayo, nangona kunjalo nditsho neAmazon iphumeze iphulo layo, isebenzisa izixhobo ezifanayo ezibizwa ngokuba yiAmazon Locker, amaxesha amaninzi eyiPosi yeCitypaq, ke esi sixhobo ngokungathandabuzekiyo siya senziwa ngokubanzi. ICorreos Citypaq ibonakala iyindlela ekhuselekileyo yokufumana ipakethe kuthi xa singekho ekhaya kwaye ke siphephe naluphi na uhlobo lokufuduka ngamanye amaxesha olungalinganiyo nathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyisebenzisa kanjani iCitypaq de Correos kunye nendlela yokufumana okuninzi kuyo
Imifanekiso yokuqala yeGoogle Pixel 3 XL ihluziwe, kwiinyanga ezimbini ngaphambi kokuba yenziwe ngokusemthethweni
Izandiso ezindala zeFirefox sele zinomhla wokuphelelwa